China High siri ike ileghara na-eguzogide ọgwụ achara n'èzí decking rụpụta na Factory | Achara ọlaedo
REBO® achara decking osisi na-asambodo maka anwụ ngwa ngwa 1 (na-adịgide adịgide) ma jiri klas 4 (ya na ala na / ma ọ bụ mmiri ọhụrụ). O nwere àgwà ndị yiri ya dị ka osisi siri ike. Bdị ike ya brinell dị elu karịa osisi. Akụkụ ahụ siri ike na-eme ka ntinye ahụ dị mfe karị, ya na obere nchara nchara.
Achara nwere ọtụtụ uru na atụmatụ na akụ na ụba na obibi. Achara bụ osisi na-eto ngwa ngwa n'ụwa. Ọ dị ezigbo mma na gburugburu ebe obibi ma belata oke nkụ nke osisi. A na-eji osisi bamboo edekọ osisi REBO ma mee ya site na nnukwu okpomọkụ, carbonization miri emi na teknụzụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ, nke na-eme ka bọọdụ ahụ dị ogologo, kwụ ọtọ, sie ike ma sie ike. A na-agba akwa achara REBO a na-agbapụta mgbochi (R10), nke zuru oke maka ụmụaka, anụ ụlọ na ndị ọzọ.
REBO® achara decking osisi dị ezigbo jụụ mgbe ọgwụgwọ thermo jikọtara ya na ịkụ achara. Usoro ọgwụgwọ ọkụ pụrụ iche na usoro abịakọrọ na-eme ka bọọdụ ahụ bụrụ njirimara kachasị elu, nke na-adịgide adịgide na ihu igwe dị iche iche. Ọbụna mgbe ọtụtụ afọ gachara, mbadamba achara na-akwụ ọtọ, na-ahapụ mbadamba ahụ na isi awọ, ọdịdị ahụ na-adịgide adịgide. Rebo® achara osisi dị nnọọ mma maka n'èzí ngwa, na ọ na ọtụtụ-eji decking, n'èzí flooring, teres, jakị, mbara ihu, ọchịchị oru ngo, wdg
REBO® achara decking osisi na-asambodo maka anwụ ngwa ngwa 1 (na-adịgide adịgide) ma jiri klas 4 (ya na ala na / ma ọ bụ mmiri ọhụrụ). O nwere àgwà ndị yiri ya dị ka osisi siri ike. Bdị ike ya brinell dị elu karịa osisi. Akụkụ ahụ siri ike na-eme ka ntinye ahụ dị mfe karị, ya na obere nchara nchara. A na-etinye mkpachị ahụ na grooves nke akụkụ ma kesaa ya na ndị na-arụ ọrụ n'ime ya, yabụ ejiri dozie mbadamba ndị ahụ. Na usoro a, a na - ahụghị obere vidiyo iji hụ ma gosipụta ezigbo mma. Elu bụ nnukwu ihe ngosi profaịlụ na isi ya nwere ike ịdị larịị ma ọ bụ usoro T&G.
Nke gara aga: Ọchịchịrị agba enweghị deformation achara decking osisi
Osote: Easy echichi strand kpara achara n'èzí flooring
Achara Carbonized Decking
Achara Decking N'èzí
Achara Hardwood Decking
Achara N'èzí Decking
Achara N'èzí Decking Ngidi
Achara osisi Decking
Achara achara osisi
Ejiri Bamboo Decking
Achara Achara Decking
Moso Achara Decking
Ahazigharị Bamboo Decking
Strand kpara achara Decking